सिक्किमका बन्द भएका २५ सरकारी स्कूलका विद्यार्थीलाई कहाँ सार्ने ? - Dainik Nepal
सिक्किमका बन्द भएका २५ सरकारी स्कूलका विद्यार्थीलाई कहाँ सार्ने ?
दैनिक नेपाल २०७६ साउन ७ गते ८:०७
शैक्षिक अधिकार गुमाइसकेका २५ वटा स्कूलका विद्यार्थीले आफ्नो अधिकार कहाँबाट पाउने त भन्ने प्रश्न आम मानिसको मनमा उठ्नु स्वभाविक हो । सिक्किमका २५ वटा स्कूलहरू उड्दा राज्य सरकारको राजस्व बाँच्ला तर गरिब घरका नानीहरूको भविश्य सुरक्षित भएको भने पटक्कै देखिन्न ।
सिक्किममा गुणस्तर शिक्षा भएन अनि गरिब घरका विद्यार्थीले राम्रो शिक्षा पाएनन् भन्ने एउटा हुण्डरीले उच्चतर माध्यमिक स्कूलदेखि कलेजसम्म हल्लाएपछि यसवर्षको राजनीतिक परिवर्तन आएको हो भन्नेकुराको श्रेय मतदानको अधिकारप्राप्त विद्यार्थीले लिएका छन् । हुन पनि अधिकाङ्श विद्यार्थीको मत यसवर्ष भने परिवर्तनको हुण्डरी मै फसेको थियो । त्यो
हुण्डरीले ठूला रुखपातलाई नछोएर साना विरुवा उडाउँछ भन्ने कसले सोचेको थियो होला र, अनि सोचेको भए आज राज्यका २५ वटा स्कूल सञ्चालित नै रहने थिए होला ।
‘भालु पुग्यो नाम्फोक अनि हल्ला बाम्फोक’ भनेजस्तो होला यो लेख ढिलो हुँदा । पूर्व सरकारको कार्यकाल मै बन्द हुने कागारमा पुगेका केही स्कूलहरूको सञ्चालन कसरी हुँदै थियो र अहिले नयाँ सरकार आउने बित्तिकै ती स्कूलहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आइपुग्यो त्यसमाथि हामीले सोच्ने मौकै पाएका छैनौं या समय नै दिएका छैनौं । सरकारद्वारा बन्द गरिएका
अधिकाङ्श स्कूलहरू ग्रामीण भेकमा छन्, जहाँबाट अन्य नजिकका स्कूल जानको निम्ति सवारी साधन अथवा कुनै उपाय पनि लगाउन मुस्किल छ ।
विद्यार्थी वर्गको अधिकारको निम्ति आवाज उठाउने समयमा सिक्किमका उच्चशिक्षार्जन गर्दै गरेका विद्यार्थी केही दिन अघि स्टूडेण्ट् राइट्स डे मनाउन ब्यस्त थिए । जहाँ
मुख्य अतिथिको रूपमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (गोले), मानव संसाधन विकास विभागका मन्त्री कुङ्गानीमा लेप्चालगायत विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरू सबै उपस्थित थिए । बन्द गरिएका स्कूलहरूको विषय र त्यहाँका विद्यार्थीको राइटको विषयमा कुनै चर्चा भएको प्रकासमा आएन । यो दुःखको कुरा थियो।
सधैं सामाजिक, आर्थिक अनि राजनीतिक हकको निम्ति आवाज उठाउने सिक्किमे जनताले स्कूलमा खाता-किताब, लुगा-जुत्ता, ब्याग र रेनीकोर्ट आदि पाएन मात्र होइन सिक्किमका अन्य स्कूलहरू पनि बन्द नहुन भन्ने सोच लिएर अघि बढ्नु पर्ने दिन आएको छ । जनता सत्ता परिवर्तनको जोशमा आएको बेला सरकारले यसरी स्कूलहरू बन्द गर्दैछ भने अहिले यस्ता कुराहरूमा प्रतिषोध नगरे आगामी दिनहरूमा गरिबका नानी पढ्न सरकारी स्कूलहरू हातका औलामा गन्तिगर्नसक्ने दिन आउनेछ ।
अहिले सिक्किममा भएका स्कूल बन्दको विषयमा चर्चा गर्दा विज्ञहरूले उक्त स्कूलहरू शिक्षा विभागको नीति अन्तर्गत बन्द गरिएको बताउँछन् । सिक्किमको पूर्व सरकारमा पनि रहेको मानव संसाधन विकास विभागले कुन आधारमा स्कूल बन्द गर्न सकेन र अहिले के कारणले स्कूल बन्द गर्ने स्थिति आएको हो यो केलाउन निक्कै हम्मे परिरहेको छ । विगतमा
लगातार रूपमा शिक्षार्जन गर्दै आइरहेका कुन स्कूलका विद्यार्थीलाई कुन स्कूलमा सरुवा गर्ने भन्ने अहिलेसम्म शिक्षा विभागले निर्णय लिएर कुनै कागत सार्वजनिक गरेको छैन । हुन त सत्ता परिवर्तन भएपछि सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने उक्ति सुनेको थियो साँचै त्यो सत्य नै हुने रहेछ । अब विद्यार्थीको हित र उनीहरूको शैक्षिक अधिकारको निम्ति विद्यार्थीका
हितधारकहरू नै सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति सिक्किममा सिर्जना हुनेरहेछ ।
१२ फिट अग्लाे पर्खाल नाघेर भीमफेदी कारागारबाट कैदी फरार
विप्लवका एक जना नेता माेटरसाइकलसहित पक्राउ
एटिपी टेनिसमा स्टेफानोससँग फेडेरर पराजित